पहिलो खेल नेपाल र नेपाली क्रीकेटको लागि एतिहासिक र अविस्मरणीय हुनेछ भने नेपाली फ्यानका लागी अझै खुशी पार्ने छ
मंगलवार, १५ श्रावन २०७५, सगरमाथा पोष्ट
नेपालले आफ्नो पहिलो एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय खेल बुधबार नेदरल्यान्ड्ससँग खेल्दैछ । नेपाली क्रिकेटका लागि एउटा गौरवपूर्ण र ऐतिहासिक परिघटना हो ।
आठ वर्ष अगाडि डिभिजन ५ खेलिरहेको नेपाललाई एकदिवसीय खेलका लागि योग्य बनाउने क्रममा धेरै खेलाडीहरु जोडिए । जसमध्ये कप्तान पारस खड्काको भूमिका सबैभन्दा महत्वपूर्ण रह्यो । ब्याटिङ, बलिङ, फिल्डिङ र कप्तानी चारै पक्षमा उनले योगदान दिएका छन् । एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त गरेपछि नेपाल क्रीकेट टोलीले आफ्नो पहिलो खेल बुधबार नेदरल्याण्डसँग उसको घरेलु मैदानमा खेल्दै छ ।
पहिलो खेल नेपाल र नेपाली क्रीकेटको लागि एतिहासिक र अविस्मरणीय हुनेछ भने नेपाली फ्यानका लागी अझै खुशी पार्ने छ यसको प्रत्यक्ष प्रसारण ले । उक्त खेलहरु अब कान्तिपुर एच डि च्यानलले प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने भएको छ । यस अघी नेदरल्याण्ड्स क्रीकेट बोर्डले प्रत्यक्ष स्ट्रिमिङ (प्रसारण) गर्ने घोषणा गरेको थियो ।
कान्तिपुर च्यानलको प्रत्यक्ष प्रसारणका बारेमा कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष कैलाश सिरोहियाले आफ्नो ट्विइटर बाट जानकारी गराएका थिए ।
नेपालले नेदरल्याण्ड्ससँग एतिहासिक दुइ एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय खेलहरु भिआरए खेल मैदानमा खेल्दै छ ।
जिम्बावेमा भएको आईसीसी विश्वकप छनोट प्रतियोगितामा यी दुइ टोली भिडेका थिए । यसै प्रतियाेगितामा दुबै टिमले एक दिवसीय मान्यता पाएका थिए ।
कसरी हेर्ने लाईभ टिभी बाहेक ?
कान्तिपुर च्यानलको वेबसाईट (kantipurtv.com) बाट पनि प्रत्यक्ष हेर्न सकिने छ ।
कती बजे सुरु हुन्छ खेल ?
नेपाली समय अनुसार दिउसो को २:४५ बाट खेल सुरु हुन्छ ।